तपाईंलाई ब्रस गर्न आउँछ ? « नेपाली मुटु
« मोवाइल पड्केर किशोरीको मुत्यु
विश्वकपमा बोतलको जर्सी »
राम्ररी र उचित रूपमा दाँत माभmने र हरेक ६ महिनामा नियमित दन्त परीक्षण गराउँदा दाँतसम्बन्धी रोगलाई केही हदसम्म सिरियस हुनबाट रोक्न सकिने प्राडा. मिश्र बताउँछन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन -डब्लुएचओ) को अनुमानअनुसार विश्वभरका ६० देखि ९० प्रतिशत बालबालिकालाई दाँतमा कीरा-क्याभिटी) लागेको छ । हामीले खाना खाएको २० मिनेटपछि नै ब्याक्टेरियाले खाद्य कण मुख्यतः गुलियो वा स्टार्च भएको वस्तुलाई अम्लमा परिवर्तन गर्छ । ‘यदि धेरै दिनसम्म दाँतको राम्ररी सफाइ गरिएन भने यो प्लाक कडा भएर टारटर बन्छ, जसले दाँत र गिजालाई खराब गर्न थाल्छ,’ प्राडा.मिश्र भन्छन् । प्लाकको ब्याक्टेरिया जतिखेर दाँतमा प्वाल गर्छन्, यसलाई बोलचालको भाषामा दाँतमा कीरा लाग्नु -कैरिज) भन्ने गरिएको छ । यसैले चकलेट, मिठाई, लसिलो पदार्थ खाएपछि ब्रस गर्नुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
मुख स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याबाट बाँच्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय नियमित उचित तरिकाले ब्रस गर्नुरहेको उल्लेख गर्दै प्राडा.मिश्र भन्छन्, ‘आधुनिक अनुसन्धानअनुसार दाँतको सफाइले मुटु रोगबाट समेत जोगाउँछ ।’ बजारमा विभिन्न प्रकारका टुथपेस्ट उपलब्ध छन् । एउटा सामान्य अर्को औषधीयुक्त -मेडिकेटेड) । मेडिकेटड टुथपेस्ट भने दाँतको विभिन्न रोग हुँदा र दाँतको माथिल्लो तह -इनामेल) नष्ट भएर चिसो तातो लाग्नुको उपचारका लागि उपयोग गरिन्छ ।
दन्त विज्ञानको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार दिनहँु कम्तीमा दुईपटक ब्रस गर्नुपर्छ । बिहान र राति सुत्दाताका ब्रस गर्नाले दाँतमा अड्किएको र गिजामा टाँसिएको खाद्य कण बाहिर निस्किन्छन् । तर खरानी, नुन वा खस्रो पाउडरको उपयोग गर्दा दाँतको बाहिरी खण्ड कोरिने गरिन्छ । नियमित र सही तरिकाले ब्रस गर्नाले दाँतमा जम्ने विभिन्न तहबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ ।
धेरै तागत लगाएर ब्रसलाई दाँतमा दल्दा दाँत सफा हुने मान्यता पूर्णरूपमा गलत हो । ‘कतिपय व्यक्ति दाँतलाई भाँडाजस्तै माभmछन्, यो पनि गलत हो,’ प्राडा.मिश्र भन्छन्, ‘धेरै दबाबले ब्रस गर्दा दाँत खिइन्छन् र दाँत सम्वेदनशील बन्छन् ।’
ब्रस गर्नुका साथै दुई दाँतबीचमा फसेको खाद्य कणलाई निकाल्न डेन्टल फलास -प्लास्टिकको धागो)को उपयोग गरेर दाँतको बीच भाग सफा गर्नुपर्छ । यसो गर्दा ५-६ मिनेट लागे पनि चिकित्सकहरूका अनुसार मुलुकमा आँैलामा गन्न सकिने व्यक्तिले गर्ने गरेको पाइन्छ । सधँै टुथ ब्रसलाई पानीले सफा गरेपछि सुकाएर राख्नुपर्छ । ब्रसलाई बिर्कोमा बन्द गरेर राख्नु हँुदैन । बिर्कोमा बन्द गरेर राख्दा यसमा जीवाणु उमि्रने क्रम जारी रहन्छ ।
कसरी ब्रस गर्ने ?
ब्रसमा पेस्ट लगाएर दाँत, गिजा एवं दाँतको मिलनस्थल इनामेलमा राखेर ब्रसलाई विस्तारै तल-माथि, हरेक दाँतमा अगाडि-पछाडि दायाँ-बायाँ ४५ डिग्रीको कोणमा घुमाउनुपर्छ । यही प्रक्रिया सबै दाँतका लागि अपनाउनुस् । यस्तै हरेक दाँतको भित्री सतहलाई समेत विस्तारै विस्तारै सफा गर्नुस् । दाँतको चपाउने सतहमा ब्रसलाई राखेर अगाडि-पछाडि चलाउनुस् ।
प्राडा.मिश्रका अनुसार अधिकांश नेपालीले एक मिनेटभन्दा कम समय ब्रस गर्नमा खर्चिने गरेका छन् । विशेषज्ञहरूका अनुसार न्यूनतम तीनदेखी चार मिनेटसम्म ब्रस गर्नुपर्छ । तथ्यांकअनुसार अधिकांश अमेरिकीहरू ४५ देखि ७० सेकेन्डसम्म दिनहँु दुईपटक ब्रस गर्छन् ।
सामान्यतः दन्तमन्जन उपयोग गर्नेले आफ्नो औँलाको उपयोग गर्छन्, जसको दन्तपंक्ति, सिधा होस्, उनीहरूको दाँत त सफा हुन सक्छ । तर बांगोटिंगो दाँतको भने हातले राम्ररी सफाइ हुन सक्दैन ।
अमेरिकन डेन्टल एसोसिएसनका अनुसार ब्रसको बि्रसेल नाइलनको हुनुको साथै ‘राउन्ड इन्डेड’ हुनुपर्छ । टुथब्रस यस्तो हुनुपर्छ, जसलाई सजिलै समात्न सकियोस् । मुखको हरेक कुनामा त्यसलाई राम्ररी घुमाएर दाँत सफा गर्न सकियोस् । सामान्य रूपमा टुथब्रसको टाउको सानो हुनुपर्छ । अर्थात् एक वा आधा इन्चजतिको हुनुपर्छ । यसले गर्दा यो मुखको हरेक ठाउँमा सहजै पुग्न सक्छ ।
उपयोग गर्ने टुथब्रस राम्रो कम्पनीको हुनुको साथै कोमल -सपmट) हुनुपर्छ । बच्चालाई भने बेबी टुथब्रस दिनुपर्छ । गिजा कमजोर भएका व्यक्ति अत्यन्त नरम -सुपर सपmट) वा सम्वेदनशील -सेन्सिटिभ) टुथब्रस उपयोग गर्नुपर्छ । दाँतको बीचको सफाइका लागि ‘इन्टरडेन्टल ब्रस’ उपयोग गर्नुपर्छ ।
दुई-तीन महिनाभित्र ब्रस फेर्नु सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ । अमेरिकन डेन्टल एसोसिएसनका अनुसार वयस्कभन्दा भने बालबालिकाको ब्रस छिटोछिटो फेर्नुपर्छ । हरेकपटक दाँत माज्दा ब्रसमा जीवाणु टाँसिने गरेको छ । ब्रसलाई धोएपछि अन्नको केही कणसमेत टाँसिएर रहन सक्छ, जसमा जीवाणु उत्पन्न हुन्छ । यसबाहेक लामो समयसम्म टुथब्रस उपयोग गर्नाले यसको बि्रस्टल बांगोटिंगो हुनुका साथै खिइन्छन् र गिजालाई चोट लाग्न सक्छ । फैलिएको ब्रसेल्स राम्रो मानिन्न । पेस्टमा पनि पmलोराइड मिसिएको हुनुपर्छ । फलोराइड दाँतमा प्वाल बन्नबाट रोक्छ । सन् १९१४ देखि टुथपेस्टमा फलोराइड मिसाउन थालिएको छ । तर ६ वर्षमुनिका साना बच्चाको हकमा भने फलोराइडयुक्त पेस्ट उपयोग गर्नबाट बाँच्नुपर्ने प्राडा.मिश्र बताउँछन् । किनभने अधिकांश साना बच्चाको टुथपेस्ट निल्ने बानी हुन्छ ।
दाँतको सफाइमा भने टुथपेस्टको बढी भूमिका हुँदैन । यो एउटा माध्यम हो, जसले चिप्लोपना, झांग -फोमिङ) र प|mेसनिङको काम गर्छ । वास्तविक काम भने ब्रसले गर्ने उल्लेख गर्दै प्राडा.मिश्र भन्छन्, ‘पेस्ट भने मटरको दानाजति लिए नै पर्याप्त हुन्छ ।’
अझ निमको दतिउनमा रोगसँग लड्ने क्षमता हुन्छ । तर यो दाँतलाई पूर्णरूपमा सफा गर्दैन । राम्रो विकल्प भने ब्रस नै हो । दतिउन गर्नु नै छ भने राम्ररी चपाउनुस्, जब दतिउनको अगाडिको खण्ड नरम हुन्छ अनि त्यसलाई दाँतमा विस्तारै सफा गर्नुस् ।
This entry was posted on June 8, 2010 at 9:59 pm	and is filed under अनौपचारिक. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.